Sida loo Beddelaan Video inay huriyaan dab
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan Video inay huriyaan dab
Qoyska Amazon huriyaan dab HD waxaa soo socda. Marka la barbar dhigo labada 7-inch huriyaan dab HDs, weyn, 8.9 inch huriyaan dab HD, sidoo kale loo yaqaan huriyaan dab 2, ayaa soo jiitay dad badan ayaa dareenka. Haddii aad tahay qof lover ah huriyaan dab HD, arrintani waa wax aad gaadhnaa raaco. Taasi sida ay u badalaan videos in dab ugu shidin ku HD for loo maqli kaamil ah. Wixii huriyaan dab HDs, waxay leeyihiin video gaar ah ay Details. Waxay sida caadiga ah waxa ay taageertaa qaab MP4. Iyada oo inta badan ah qaabab video sida AVI, MOV, MKV iwm waa aqlka ay hindiseen. Mid ka mid ah xalka dorable waa in la isticmaalo oo lagu kalsoonaan karo huriyaan dab HD video Converter.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxay noqon kartaa ugu fiican huriyaan dab HD video Converter ee suuqa. Waxa si fudud oo dhaqso u shaqeeyo. Uma baahnid inaad u dhigay qiimaha wax u dhimaya oo kaliya u baahan tahay in ay doortaan pre-goob filaayo in huriyaan dab HD. Ka dib markii in, this video weyn in ay huriyaan dab HD Converter si toos ah u caawin karaan in aad loogu badalo videos inuu u ciyaaro qalabka 30X dhaqso aan khasaaro tayada wax.
Tilmaan-bixiyahan waxa ka hooseeya idin bari doonaa sida loo sameeyo tan tallaabo shaqo weyn talaabo. Marka hore, soo baxdo iyo rakibi weyn huriyaan dab HD video Converter.
1 Import videos in this video in Converter huriyaan dab
Waxaa jira button on dhinaca kore ee bidix ee interface ugu weyn this app ee. Ka dib marka aad u ordaan, riix badhanka si ay u dajiyaan videos aad loo raadinayo in diinta video. Ama, si toos ah jiitaa-iyo-hoos u dhac ayaa sidoo kale waa hab fiican oo lagu shuban faylasha aad.
2 Dooro qaab filaayo in huriyaan dab
Faa'iidooyinka ugu weyn ee barnaamijkan waa in la siiyo dadka isticmaala leh qaab si toos ah-filaayo in wax soo saarka u huriyaan dab. Idinkuna ma waxaad u baahan tahay inaad dhigay dhimaya kasta. App Tani si toos ah u caawin doontaa in aad ka dhigto videos ugu fiican ee ku haboon huriyaan dab nooc kasta. Taasi aad bay u fududayn kara shaqada, miyaanay ahayn? Ok. Tallaabooyinka faahfaahsan waxaa lagu muujiyey sida soo socota:
Hit icon image Qaabka guriga dhankiisa midigta oo ah interface ugu weyn, ka dibna tag "Device" tab, socda, doortaan "huriyaan dab" doorasho ka "Qaar kale" category.
3 bilow videos inay diinta ka huriyaan dab
Dhinaca geeska hoose ee midig of this Video Converter 's interface, kaliya riix "Beddelaan" button. App Tani bilaaban doono diinta videos inay huriyaan dab qaab socon waqti. Oo waxaad arki kartaa dhammaystirka boqolkiiba iyo waqtiga inta hadhay.
Ka dib markii diinta, waxaad kaliya riix "Folder Open" doorasho ee interface ugu weyn in la helo files wax soo saarka. Markaas, iyaga lagu wareejiyo si aad u huriyaan dab loogu madadaalada. Waxaad ka heli doontaa content yaabka digital waxaa la ciyaari karaan qalabka si aad u wanaagsan.
Sida loo sameeyo GIF ka canabka
Sida loo Download MySpace playlist Effortlessly
Samee Image 3D qoqobada Flash la Flash Image Rotator